Huawei's HarmonyOS ga-abakwa smartwatches na laptọọpụ | Gam akporosis
Huawei webatara sistemụ ekwentị ya akpọrọ HarmonyOS tupu ọnwa a. Ọ bụ ezie na nke a bụ na mmepe ruo afọ ụfọdụ, ya igba egbe e accelerated n'ihi na ihe ndị Donald Trump ji eme ihe megidere ndị na-emepụta China ọnwa ole na ole gara aga n'ihi esemokwu nledo metụtara ya na gọọmentị China, nke ewepụrụ ... na akụkụ.
HarmonyOS na atumatu ka ibu nnukwu asọmpi gam akporo, nakwa maka Apple si iOS. Na ọkara ma ọ bụ ogologo oge ọ ga-ekwe omume na ọ ga-ewe nnukwu ahịa ahịa site na sistemụ arụmọrụ ndị a emeelarị. Ihe na-adọrọ mmasị banyere ya bụ na e chere na a ga-ewepụta ya maka ekwentị mkpanaaka, mana ọ dị ka ọ ga-abụ naanị maka ndị a, kamakwa maka nche elekere na laptọọpụ.
Na mmepe na nso nso a, Peter Gauden, Huawei's Senior Global Product Manager, kọwara HarmonyOS ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ dị ka "sistemụ arụmọrụ maka ọdịnihu." Nke a gosipụtara nke ahụ ga-oru na laptọọpụ na smartwatches, ọ bụ ezie na ọ ga-erute ọdụ ndị a n'ụzọ dị iche iche ma gbanwee ụzọ anyị ga-esi chọta ya na smartphones, n'ezie.
Huawei Watch GT nọ n'ọrụ na Watch GT Mara
Nkwupụta ahụ ka enyere na nkowa gbasara sọftụwia ọhụrụ a na London, UK. N'ebe ahụ, o kwuru banyere ikike nke ngwanrọ a iji jikọọ ngwaọrụ dị iche iche na akụkụ ndị ọzọ ya.
Etinyebeghị HarmonyOS na ekwentị ọ bụla ma ọ bụ ọnụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Egosiputara na ya ga adighi nma na ngwa oru ya, mana amaghi nke oma na mgbe ma obu. Ndi isi ulo oru, iji nyeju anya ihe omuma a enyere, kpughere nke a ụfọdụ smartwatches na laptọọpụ nwere ike ịbụ ihe mbụ ọnụ na-eje ozi dị ka ụlọ maka sistemụ arụmọrụ a. Nke a bụ ihe anyị ka ga-ahụ. N’oge na-adịghị anya, anyị ga-ahụ ihe ụlọ ọrụ ndị China kwadebeere anyị na OS a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Huawei's HarmonyOS na-abịakwa smartwatches na laptọọpụ
Obere oge Travelleres bụ usoro ihe eji egwu egwu nke ị gafere oge